Agaasimaha idaacadda Codka gobolada Dhexe oo Cadaado lagu xiray - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Agaasimaha idaacadda Codka gobolada Dhexe oo Cadaado lagu xiray
August 10, 2016 admin6493 Comments on Agaasimaha idaacadda Codka gobolada Dhexe oo Cadaado lagu xiray
Waxaa goordhow lagu xiray Magaalada Cadaado agaasimaha idaacada codka gobolada dhexe Maxamed maxamuud Aw Aadan, ahna wariyaha Universal TV ee degmada Cadaado, Agaasimaha ayaa hadda ku xiran saldhigga dhexe.
Agaasimaha oo aan khadka taleefanka kula xariirnay ayaa inoo xaqiijiyey in uu u xiran yahay maamulka degmada Cadaado, Arimaha loo xiray wali ma cadda, inkastoo ilo xog-ogaal ah ay inoo xaqiijiyeen in agaasimaha loo xiray arimo isqabsi dhul ku saabsan.
Waa arin ku cusub xarigga suxufiyiinta, inkastoo arintan la sheegay in aysan la xariirin arimo saxaafadeed.
Ilhaan Cumar oo ku Guulaysatay kursiga Baarlamaanka Minnesota ee degmada 60-B (Sawirro)
3 thoughts on “Agaasimaha idaacadda Codka gobolada Dhexe oo Cadaado lagu xiray”
Nuur Shariif Shaacir says:
Taasi waa Arimo gaar ah in la baahiyaba ma ahayn hadeysan Saxaafad la xiriirin Anagoo Microphan wadanaa nala xiri jiray saan qarin jirnay si ayan Sumcada Saxaafada u dhiman ama anaga C.V.ga noogu gelin.
Qofkuu Xarig kudhaco Micnaheedu waa Dambiile ama Dambi baa lagu Tuhmay(Eedeysane)